Anambra, Micnet Ejikerela Inye Ndị Bụ Ọkaibe Na Mmụta Nkwanye Ugwu | Igbo Radio
Ọchịchị steeti Anambra ga-ele ọbịa na mmemme nkwanye ùgwù a kpọrọ "Educational Icon Award" nke ahọ 2020/2021, bụ mmemme nkwanye ùgwù maka ndị bụ ọkaibe na mmụta nakwa ndị tụnyegoro ụtụ n'ụzọ dị iche iche n'ịkwàlite ọnọdụ mmụta.
Onyeisi nhazi mmemme a, ma bụrụkwa onyeisi ụlọọrụ 'Micnet Concept International' bụ Maazị Mike Nebo bụ ya kwupụtara nke a n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ. O mere ka a mara na ọ bụ nà ụlọọrụ ya bụ 'Micnet Concept International' na gọọmenti steeti Anambra ga-ejikọ aka ọnụ n'ịchịkọba na ịhàzi mmemme a, site n'okpuru ngalaba ụlọọrụ na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti ahụ.
Dịka o siri kọwaa, ebumnobi mmemme nkwanye ugwù ahụ bụ iji merùbe ma gbàkwa ha ume, bụ ndị dị iche iche tụnyegoro ụtụ ma nye nkwàdo pụtara ìhè n'ịkwàlite ọnọdụ mmụta, ya na ụlọakwụkwọ na ụlọọrụ dị iche iche megoro nke ọma n'ihe gbasaara mmụta. Ọ sị na ya bụ mmemme bụkwa nke a ga-esi na ya wee nye nkwanye ùgwù nyegara ụlọakwụkwọ dị iche iche na steeti Anambra megoro nke ọma n'ule na n'asọmpi dị iche iche, ma n'ala Nigeria, ma n'ogoogo mba ụwà. O kwukwara na mmemme ahụ ka a ga-esikwa na ya wee chọpụta ma kelee ụmụakwụkwọ dị iche iche ụbụrụ ha na-anụ ọkụ na steeti ahụ.
O mere ka a mara na ya bụ nkwanye ùgwù nwèrè ngalaba dị iche iche, dịka ngalaba maka ndị ọrụ obi ebere n'ihe gbasara mmụta (bụ ndị ji ego ha enyere ndị mmadụ aka ịgụ akwụkwọ ma jirikwa ya na-akwalite ọnọdụ mmụta); ngalaba maka ụlọakwụkwọ; ngalaba maka ụlọọrụ na òtù dị iche iche; na ngalaba maka ụmụakwụkwọ.
N'ihe gbasaara ngalaba nke ụmụakwụkwọ, Maazị Nebo mere ka a mara na ọ bụ nke a ga-esi na ya wee chọpụta ụmụakwụkwọ nwegasịrị ọmarịcha ọnatarachi dị iche iche; ma kọwakwa na a ga-enwe asọmpi edemede, ịgụ egwu na isè ihe osise na galaba ahụ maka ụmụakwụkwọ sekọndịrị na praịma niile dị na steeti Anambra, ndị nwere mmasị isònyè na ya bụ asọmpi. O kwuru na ndị mere nke ọma n'asọmpi ahụ ka a ga-ekesara ọkpụrụkpụ ego dị nde naịra atọ (N3, 000, 000) dịkà ihe nrita.
O jikwazịrị ohèrè ahụ kpọkuo ndị Anambra ka ha gaa n'amasaịba ha bụ
iji kpọlite/kpọpụta onye/ndị ha chọrọ ka e soro nye nkwanye ùgwù a maka ihe ukwu dị iche iche o megoro na ngalaba mmụta. Ọ kpọkukwara ụmụakwụkwọ na ụlọakwụkwọ dị iche iche ka ha wèré ọsọ wèré ijè gaa n'isi ụlọọrụ 'Anambra Broadcasting Service (ABS)' maọbụ n'ụlọọrụ 'Post Primary School Services Commission (PPSSC)' dị n'Awka, ka ha wee debànye aha n'akwụkwọ iji wee sonye n'asọmpi ahụ.
Maazị Nebo kèlèkwàzịrị ọchịchị steeti Anambra, nke Gọvanọ Willie Obianọ nọ n'isi ya, ma kèlékwa Kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ dị àlà na steeti ahụ, bụ Ọkammụta Kate Omenụgha maka ịnabata ha, ikwete nakwa iso ha wee hazie ma buo ya bụ nnukwu mmemme.
Na ntụnye nke ya, nnukwu onye enyemaka pụrụ ichè nye Gọvanọ Obianọ n'ihe gbasaara mgbasaozi, bụ Oriakụ Ify Aronu Okafor kọwara Anambra dịka steeti kacha eme nke ọma n'ihe gbasaara mmụta na agụmakwụkwọ n'ala Nigeria, ma kọwakwa na agụmakwụkwọ so n'otu ihe na-echu ọchịchị nọ ugbua na steeti ahụ ụra, bụzị nke mere o ji etinye úchu na ya nke ukwuu.
Ọ kọwara mmemme nkwanye ugwu ahụ dịka nke magburu onwe ya, ma kwuo na ọ bụghị naanị na nke ahụ ga-abụ ihe agbamume nyegara ndị dị iche iche na-akwàlite agụmakwụkwọ na steeti ahụ; kama na a ga-esikwa na ya wee nye ndị dị iche iche na-eme nke ọma n'agụmakwụkwọ ego gbara ọkpụrụkpụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị dị iche iche a ga-enye nkwanye ugwu ahụ ga-abụ ndị tozuru oke nakwa ndị a sara anya na mmiri wee họpụta, dịka ihe ha mere siri dị.
N'okwu nke ya, otu onye n'ime ụmụakwụkwọ ná-ésònye n'asọmpi edemede nke ụmụakwụkwọ, ma bụrụkwa nwata akwụkwọ 'Eagle Power College, Awka' bụ obere Maazị Chukwunemerem Ike, kọwara ya bụ atụmatụ nkwanye ùgwù na asọmpi dịka nke magburu onwe ya. Ọ kpọkuzịkwara ụmụakwụkwọ ndị ọzọ esonyèbèghị n'asọmpi ahụ ka ha mee ngwa gaa n'ebe ndị ahụ e kwuru ga debánye aha ha ugbua, maka na ọchụpụrụ onwe ya n'ụgbọ adịghị mma ịsị na ụgbọ eruteghị ya.
Mmemme nkwanye ugwu 'Education Icon Award 2020/2021' a bụ agba nke anọ ya, ma bụrụkwa nke a kpọrọ "Ụbọchị Nnọkọ Nke Anyị Na Gọvanọ Obianọ" (ma a tụgharịa ya 'n asụsụ Igbo).
Ndị nhazi ya bụ mmemme ka ga-ekwupụta mgbe na mpaghara ebe ya bụ mmemme nke ahọ a ga-ewere ọnọdụ n'ime steeti Anambra.